एमालेमा पहिरो, माओवादीमा ओइरो | BIVAS
← मदन भण्डारीको हत्या आफ्नै कारणः नेपाल	धुमपान रोक्न जनचेतना →	एमालेमा पहिरो, माओवादीमा ओइरो	31
नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले राजीनामा दिएपछि विदेशी दलाल र प्रतिक्रियावादीका साथै नेपाली कांग्रेसको बुई चढेर एमाले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेपछि उक्त पार्टी तहस नहस हुने भएको छ । एमाले पार्टीभित्रकै राष्ट्रवादी र नागरिक सर्वोच्चताका पक्षधर स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरू पार्टीदेशी, विदेशी प्रक्रियावादीहरूको चङ्गुलमा फसेको बताउंदै सच्चा कम्युनिस्ट एकीकृत नेकपा माओवादी मात्र भएको ठहर गर्दै माओवादीमा प्रवेश गर्नथालेपछि एमालेमा ठूलो पहिरो जाने क्रम सुरु भएको छ भने एकीकृत नेकपा माओवादीमा सच्चा राष्ट्रवादी र नागरिक सर्वोच्चताका पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ताको ओइरो नै लाग्न थालेको छ । यसैक्रममा एमाले निकट अनेरास्ववियु परित्याग गरी अखिल क्रान्तिकारीमा प्रवेश गर्नेको संख्यापनि वढेको वताइएको छ ।
इतिहासमा पतनको बाटो रोजेको एमाले जनताको अधिकारको निम्ति भन्दा पनि सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्दै राजाको अवशेषको रुपमा रहेको प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटुवाललाई जोगाउने कदम सम्म आईपुग्दा पतनको अन्तिम संघारमा उभिन पुगेको छ । यो स्थितिमा सत्ताका लागि होईन जनताको अधिकारका लागि लड्ने एउटामात्र पार्टी एकिकृत नेकपा माओवादी पुष्टि भएकोले आजकै मितिबाट एमाले पार्टी र यस निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु परित्याग गरी एनेकपा माओवादी पार्टी र यस निकट अखिल क्रान्तिकारीमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्दछौं ।
१. उमेश गुप्ता -केन्द्रीय सदस्य, अनेरास्ववियु
२. मनिषा दनुवार -अञ्चल सदस्य, अनेरास्ववियु
३. निता दनुवार -जिल्ला कोषाध्यक्ष, अनेरास्ववियु
४. प्रभाकर गुप्ता -जिल्ला सदस्य तथा विरगञ्ज नगर इन्चार्ज, अनेरास्ववियु ५. अजितकुमार शाह -जिल्ला सदस्य तथा क्षेत्रीय इन्चार्ज, अनेरास्ववियु ६. राजेश गुप्ता -जिल्ला सदस्य, अनेरास्ववियु
७. रोषण अधिकारी -जिल्ला संयोजक, सांस्कृतिक विभाग, अनेरास्ववियु
८. राकेश केसी -स्ववियु सदस्य, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, विरगञ्ज
९. रबी राउत -नगर उपाध्यक्ष, अनेरास्ववियु
१०. मुन्ना शाह -नगर उपाध्यक्ष, अनेरास्ववियु
यसैविच एमालेले कम्युनिस्टको नाममा प्रतिक्रियावादीको सेवा गरेको ठहर गर्दै एमालेका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिल्लीराज खनालले एमाले परित्याग गरी एकीकृत नेकपा माओवादीमा प्रवेश गर्नुभएको छ । आफू नेकपा एमालेको कार्यदिशाबाट पटक्कै सन्तुष्ट नभएको र एमाले कम्युनिस्ट आचरण त्यागिसकेकाले एमाले परित्याग गर्नुपरेको बताउनुभएको छ । नागरिक सर्वोच्चताविरुद्ध प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादीहरूसाग सांठगांठ गरी सरकार बनाएकोले उसलाईकम्युनिस्ट भन्ने कुनै अधिकार नभएको उहांको धारणा थियो । यसै क्रममा डा. डिल्लीराज खनाललाई माओवादीका अध्यक्ष एवं गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा अविर र माला लगाई पार्टीमा प्रवेश गराउनुभएको थियो । डा. डिल्लीराज खनालले बदलिंदो परिवेशअनुरूप एमालेले कार्यगर्न नसकेको बताउंदै वर्तमान समयमा एकीकृत नेकपा माओवादी मात्र देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध भएकोले आफू एकीकृत नेकपा माओवादीमा प्रवेश गर्नुपरेको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत् जनाउनुभएको छ ।
उहांले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्ति यसप्रकार छ-
सफल दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात् मुलुकमा ठूलो परिवर्तन भएको छ र सायदै समकालीन इतिहासमा यस्ता परिवर्तनहरू यति छिटो भएका उदाहरणहरू होलान् । मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्त भएको छ । ज्यादै समावेशी प्रकृतिको संविधानसभाको निर्माण भईमुलुक नयां संविधान बनाउने प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ । हामी सच्चा लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने लक्ष्य सहित एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य र संघीय प्रणालीको स्थापनाका लागि छलफल र गृहकार्यमा व्यस्त छौं । यी युगान्तकारी परिवर्तनका लागि जनविद्रोह हुंदै शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा निर्णायक भूमिका खेलेको तत्कालिक नेकपा -माओवादीलाई संविधानसभामा अत्यधिक मत दिई अगुवाईको भूमिका निर्वाह गर्ने जनताले अभिमत दिएका छन्। यसैको परिणामस्वरूप संविधानसभा निर्वाचनको केही समयपछि उसैको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन, तमाम मुलुकका राजनीतिक र अन्य मुद्दामा सम्बोधन, शान्तिप्रक्रियाको सुदृढीकरण र संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न हुंदै आएको थियो । तर, विगत केही समयदेखिका पछिल्ला सिर्जित राजनीतिक घटनाक्रमहरूका कारण उसको नेतृत्वको सरकारले परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भयो । त्यसबाट सदियौंदेखिको संरचनागत र सामाजिक द्वन्द्व हुने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ । यो बेला मुलुकको वामशक्तिको रूपमा स्थापित नेकपा -एमाले सरकारबाट हटी राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्न उक्साउने कार्यमा संलग्न हुने तथा मुलुकका यथास्थितिवादी शक्तिहरूसंग सांठगांठ गर्दै सरकारकै नेतृत्व गर्ने कार्य गर्दैछ । यो कम्युनिस्ट आदर्श र पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रस्तावको विपरीत भएको पुष्टि हुन गएको छ । उसका कदमहरू दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मर्म र भावना तथा संविधानसभामा जनताका अभिमतद्वारा नागरिक सर्वोच्चता सुदृढ गर्ने भावना विपरीत छ । यसका गतिविधिहरू राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सम्मानप्रतिको प्रतिबद्धता विपरीत देखिन पुगेका छन्। यसको स्थितिमा नेकपा एमालेमै बसेर काम गर्नु कम्युनिस्ट आदर्श र मान्यताविपरीत हुने निष्कर्ष निकाली म नेकपा एमाले पार्टी परित्याग गर्ने टुङ्गोमा पुगेको छु ।
म ८-९ कक्षामा पढ्दादेखि नै पुष्पलाल समूहमा संगठित भईवामआन्दोलनमा सक्रिय हुंदै आएको थिएं । अर्घाखांचीमा २०२८/२९ सालतिर सामन्ती शोषणका विरुद्धको अभियानमा लाग्दा थुनुवामा समेत परेको थिएं । २०३२ सालको विद्यार्थीआन्दोलनमा मेरो सक्रिय सहभागिता रहिआएको थियो । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो ठाउंबाट सक्दो भूमिका खेलेको थिएा । २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४७ सालमा माले र त्यसपछि नेकपा एमालेको संगठित सदस्य भई अविछिन्नरूपमा पार्टीका विभिन्न जिम्मा लिई सक्रियताका साथ काम गरिरहेको थिएं । नेकपा एमालेको पांचौं महाधिवेशनबाट पारित जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमको आर्थिक पक्ष निर्माणदेखि पार्टीको आर्थिक फांटमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको थिएं। २०५१ सालमा बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भईबजेट र कार्यक्रम निर्माणमा अहम भुमिका खेलेको थिएं । २०५६ सालको निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यसमेत निर्वाचित भएको थिएं । पार्टीको संगठित सदस्य लिएयता अविछिन्नरूपमा आर्थिक फांटसंग सम्बन्धित विभागहरूमा रही पार्टीको काम गर्दैआएको थिएं । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को संस्थापक उपाध्यक्ष हुंदै सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दैआएको थिएं । वाम बुद्धिजीवीहरूबाट एमाले क्रमशः दक्षिणपन्थि भासमा जांदैछ भन्ने टिकाटिप्पणी हुंदै आएको थियो । म स्वयम आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनबाट एमालेप्रति झस्केको थिएं । मैले उक्त महाधिवेशनको समूहगत छलफलमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा विभिन्न विषयमा फरक मत र दृष्टिकोणसमेत प्रस्तुत गरेको थिएं । उक्त राजनीतिक प्रतिवेदन आफैंमा अस्पष्ट र विरोधाभाषपूर्ण छ । राजनीतिक प्रतिवेदनको पेज १८९ मा ‘यतिबेला सामन्ती, प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरू नै नेपाली जनताका प्रधान शत्रु वा निशाना हुन् भनियको छ । तर, त्यही प्रतिवेदनको पेज २२८ र २२९ मा भनिएको छ- “यतिबेला अर्धसामन्ती अर्थतन्त्र विस्तारै विघटनतिर जांदैछ…. । अहिलेको संक्रमणकालमा नेपाली समाज अर्धपुंजीवादी चरित्र लिएर अगाडि बढ्दैछ…. । अर्थतन्त्रको अर्धसामन्ती चरित्र विघटनतिर जाने अवस्थामा समाजमा सामन्तीवर्गसाग प्रधान अन्तरविरोध कसरी हुन सक्दछ ? त्यस्तै प्रतिवेदनको धेरै ठाउामा जनताको प्रधान अन्तर विरोध दलाल नोकरशाही पुंजीवादसंग समेत रहेको कुरा गरिएको छ । अर्धपुंजीवादी अवस्था र दलाल नोकरशाही पुंजीवाद के एउटै हुन् ? अझ सिङ्गो दस्तावेजमा दलाल, नोकरशाही पुाजीवादबारे स्पष्ट गर्नेर त्यसलाई कसरी समाप्त गरिनेछ भन्ने चर्चासमेत छैन । यसरी अहिले दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादी शक्तिहरूसंग सांठगांठ गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने जुन कार्य नेकपा एमालेबाट भएको छ । त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रधान अन्तर विरोधसम्बन्धी उसको ठहर विपरीत छ । अब एमालेका लागि यथास्थितिवादी शक्ति को हो भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था खडा भएको छ ।
यो जगजाहेर छ कि हिजो नेकपा माओवादीले अघि सारेको कार्यनीतिसंग मेरो पूरै असहमति रहिआएको थियो । तर, १२ बुंदे सम्झौता र तत्पश्चात शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा उसको निर्णायक भूमिका लगत्तै बृहत् शान्तिसम्झौता र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता तथा कानुनको शासन, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा समर्पित हुंदै मुलुकमा रहेको शोषण, उत्पीडन र पछौटेपनका मूल कारक तत्वहरूको सम्बोधन मार्फत् नेपाली समाजलाई अग्रगमनतर्फ लैजान ऊ जसरी अघि बढिरहेको छ, त्यसबाट वाम विचारमा आस्था राख्नेहरूको ऊप्रति अरू आकर्षण बढेर गएको छ । नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कसैसंग सम्झौता नगर्ने बरु सरकारबाटै हट्नेसम्मको जुन विशिष्ट ऐतिहासिक उदाहरण नेपाली जनताको सामु उसले पेस गरेको छ, ऊ राष्ट्र र जनताप्रति कति समर्पित छ भन्ने थप रूपमा पुष्टि भएको छ । यसबाट एकीकृत नेकपा माओवादीप्रतिको मेरो सम्मान र आस्था बढेको छ । त्यसैले म आज नेकपा एमाले पार्टी परित्याग गर्दै एकीकृत नेकपा माओवादीमा समाहित हुने घोषणा गर्दछु ।
नेपाली समाजमा रहेको सदियौंदेखिको संरचनागत र सामाजिक द्वन्द्वको सम्बोधन परिवर्तनकामी प्रगतिशील बाटोबाट मात्र सम्भव छ । त्यसको अगुवाईमा एकीकृत नेकपा -माओवादीले गरेको छ भन्ने कुरा उसका विचार र कदमहरूले पुष्टि गरेका छन्। आज देशमा जे-जस्ता राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित भएर संविधानसभामार्फत् सम्बोधन हुंदैछन् ती अधिकांश माग, आन्दोलन र जनविद्रोहको रूपमा उसैबाट अघि सारिएका हुन्। यसै कारणले पनि अबको नयां ढङ्गको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको आन्दोलनको अगुवाई गर्ने जिम्मा नेपाली जनताले उसैलाई दिएका छन् । तर, आज कथित सर्वसत्तावादको नाममा जनतालाई भ्रमित गर्दै नेपाली समाजलाई जसरी पनि यथास्थितिमै राखी राख्ने वा पछाडि धकेल्ने षड्यन्त्र विभिन्न शक्तिहरूबाट भइरहेको छ । यस्तो षड्यन्त्रलाई चिर्दै अगाडि बढ्न एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीलाई बलियो र सुदृढ बढाउन आवश्यक छ । उसैको नेतृत्व र अगुवाईमा एकीकृत वाम आन्दोलन अघि बढाउन जरुरी छ । त्यसैले म बिना सर्त एकीकृत नेकपा -माओवादी पार्टीमा समाहित भइरहेको बेला तमाम वाम बुद्धिजीवीहरूलाई इतिहासले दिएको विशिष्ट कार्यभार पूरा गर्दै लोककल्याणमा आधारित समृद्ध नेपालको द्रूत निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने गरी एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीलाई बलियो बनाउने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन हार्दिक अपिल समेत गर्दछु ।
डा. डिल्लीराज खनाल, पूर्वएमाले नेता,
हालः विद्रोह गरी एनेकपा माओवादीमा प्रवेश
० तपाईंले किन एमाले सरकारमा गएकै बेला पार्टीबाट विद्रोह गर्नुभयो ?
मेरो निकटका मित्र माधवकुमार नेपाल नै प्रधानमन्त्री भएको बेला मलाई एमाले पार्टीबाट विद्रोह गरौं भन्ने लागेर विद्रोह गरेको हुं । मलाई एमालेले लिएको विचार र बाटो मन परेन, त्यसकारण उक्त पार्टीबाट विद्रोह गरी एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गरेको हुं ।
० तपाईंले एमालेबाट विद्रोह गर्नुको मुख्य कारण के हो ?
मैले विद्रोह गर्नुको मुख्य गरी दुईवटा कारण छन्। एउटा आठौं महाधिवेशनमा सारिएको राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति मेरो आपत्ति छ र अहिलेको कटवाल प्रकरणमा एमालेले नागरिक सर्वोच्चता लत्याएको कारणले नै मैले विद्रोह गरेको हुं । यथास्थितिवादी को हुन भनेर एमालेले सोच्ने बेला आएको छ । हामीले एमालेलाई यथास्थितिवादी को हो भनेर उल्टो प्रश्न गर्नुपर्नेभएको छ । यथास्थितिवादी र दक्षिणपन्थी शक्तिसंग घांटी जोडेर सरकारमा जाने जुन काम एमालेले गर्‍यो, त्यसले आठौं महाधिवेशनको मर्मलाई कुठाराघात गरेको छ । महाधिवेशनको मर्म विपरीत अहिले सरकारमा जाने काम एमालेले गरेको छ । त्यसकारण पनि मैले विद्रोह गरेको हुं। अर्कोतिर मुलुकमा अहिले जेजति राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन्, त्यो सबै एकीकृत नेकपा माओवादीले उठाएको मुद्दा हो । गणतन्त्रको कुरा, संघीयताको कुरा, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको कुरामा एकीकृत माओवादीले ठोस कार्ययोजना अगाडि सारेको छ भन्ने मलाईलागेर यस पार्टीमा प्रवेश गरेको हुं। मैले यो मुलुकलाई शोषण, उत्पीडनबाट उन्मुक्ति दिनको निम्ति सच्चा मानेमा छोटो अवधिमा संघीय नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति माओवादीको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ भन्ने कुराको निचोड निकालेर म एकीकृत नेकपा माओवादीमा प्रवेश गरेको हुं।
० तपाईं जननेता मदन भण्डारीको हितैषी मित्र पनि हुनुहुन्छ, उहांसंगै बसेर धेरै समय काम पनि गर्नु भयो । अब एमालेको भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ ?
मैले मदन भण्डारीसंग बसेर उहांले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवादको आर्थिक कार्यक्रमलाई समृद्ध गर्ने काम गरेको हुं । म उहांको आर्थिक सल्लाहकार पनि थिएं । अहिले एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई विश्रृंखलित पार्न खोजेको छ । जुन ढङ्गले एमाले अहिले अगाडि बढ्दैछ, त्यसले पार्टीभित्रका बुद्धिजीवीदेखि लिएर आम जुझारु कार्यकर्ताहरू त्यस पार्टीभित्र बसेर एमालेले मुलुकमा परिवर्तन ल्याउंछ भन्ने आशा, भरोसा गर्ने अवस्था छैन, विस्तारै क्षीण हुंदै गएको छ । एमालेले नयां सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न सक्दैन । नेपालमा एकीकृत वाम आन्दोलनको खांचो छ । त्यो एकीकृत वाम आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शक्ति भनेकै एकीकृत नेकपा माओवादी मात्र हो ।
० संविधानसभा निर्वाचनमा हार्दा महासचिव पदबाट राजीनामा दिने अहिले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने माधव नेपालको कार्यप्रति तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
२०४७ सालमा संविधान बनाएको अनुभव माधव नेपालसंग छ भनेर माओवादीकै विशेष पहलमा उहांलाई संविधान निर्माण समितिको अध्यक्ष बनाइयो । तर, त्यसलाई उहांले बेठीक ढङ्गले उपयोग गर्नुभयो । आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति उहांले त्यसलाई उपयोग गर्नुभयो ।
० वर्तमान सरकारको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीलाई माइनस गरेर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, नयां संविधान निर्माण गर्ने अवस्था हुनै सक्दैन । अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयलाई सच्याउने नाममा जुन उल्ट्याउने कार्य वर्तमान गठबन्धन सरकारबाट भइरहेको छ, यसले मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रयत्न गरिंदैछ भन्ने मलाई लाग्छ । माओवादीलाई पन्छाएर जुन अगाडि जाने प्रयास गरिएको छ, यो धेरै दिन टिक्दैन । अहिलेको बटम लाइन भनेकै राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम, सच्याउने र नयां ढङ्गले नयां १२ बुंदे सहमति गरेर अगाडि बढ्ने हो । एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दलहरू सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यो सरकार धेरै दिन टिक्छ भन्ने मलाईलाग्दैन । ० एमालेलाई अहिले सरकारमा जाँदा ठूलो घाटा पुर्‍याउँछ भन्ने छ नि ?
मैले विद्रोह गरेपछि मलाई मेरो गृहजिल्लाका साथीहरूबाट फोन आइरहेको छ । उहांहरू पहिले एमालेमै रहियो यहीं रहिरहनुपर्छ भन्ने मानसिकताले मात्र त्यो पार्टीभित्र बसिराख्नु भएको छ । उहांहरू एउटा ठाउं पाउने बित्तिकै र हामी एकीकृत नेकपा माओवादीमा बसेर काम गर्न सक्छौं भन्ने अवस्था निर्माण हुने बित्तिकै एमालेमा ठूलो पहिरो आउने स्थिति छ । एमालेको अहिलेको कार्यशैलीले गर्दा त्यसभित्रका जुझारु कार्यकर्ताहरू विद्रोह गर्ने तयारीमा छन् । एमालेको पक्षमा लाग्नको निम्ति उसको राजनीतिक विचार समाप्त भइसकेको छ ।
० एमाले भित्र भित्रै फुटको संघारमा पुगेको छ भनिन्छ नि ? के त्यस्तो स्थिति छ ?
हो, एमाले फुटको संघारमा पुगेको छ । त्यसभित्र अहिले राजनीतिक अन्तरविरोध उत्सर्गमा पुगेको छ । सभासद्हरूभित्र पनि राष्ट्रपतिको कदमलाईअसंवैधानिक भन्नेहरू धेरै छन्। यसै विषयमा स्वयम पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो । यो अस्वभाविक गठबन्धनले गर्दापनि एमाले पार्टीभित्र फुट आउने सम्भावना बढेर गएको छ । नीतिगत कारण र अहिले जुन रूपमा अस्वभाविक कारणले प्रधानमन्त्री बन्ने कार्यभयो, यसले एमालेमा ठूलो अन्तरविरोध सिर्जना गरेको छ ।
० नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा रहंदै माओवादीले सरकार छाड्यो तर एमाले नागरिक सर्वोच्चतालाई लत्याउंदै सरकारमा गएको छ, यसले शान्तिप्रक्रियालाईकस्तो असर पार्ला ?
मलाई लाग्छ, सेनालाई लोकतान्त्रिकरण नगरी नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्नर लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सकिंदैन । अरू पार्टीहरूले गरेको गल्तीलाई नसच्याउने हो भने मुलुकमा थप मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुन्छ ।
० तपाईं राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वसदस्य पनि हुनुहुन्छ, के मुलुकमा एकीकृत नेकपा माओवादीले सारेको एजेन्डाबाट जनताले शान्तिको अनुभूति गर्न सक्लान् ?
जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन भयो । त्यसपछि जुन लोकतान्त्रिक विधिबाट एकीकृत नेकपा माओवादी अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले मलाई लाग्छ कि सच्चा लोकतान्त्रिक परिपाटी स्थापना गर्न र अहिलेको मुलुकको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि जाने शक्ति भनेकै एकीकृत नेकपा माओवादी हो । माओवादीको योजना र एजेन्डालाई अगाडि बढाएर लैजाने हो भने दिगो शान्ति स्थापना हुन्छ । तर, दिगो शान्ति भन्ने बित्तिकै निरपेक्ष हुने भन्ने हुनै सक्दैन । मानिसहरू गरिबीमा बांचिरहने, शोषण भइरहने खालको शान्ति अब यहां सम्भव छैन ।
० वर्तमान अवस्थामा अरू पार्टीहरूभन्दा एकीकृत माओवादी नै सही छ भनेर माओवादीमा प्रवेश गर्नु भयो । माओवादी ठीक छ भन्ने आधारहरू के-के छन् ?
म माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धको कार्यनीतिसंग पूर्णरूपमा सहमत थिइन । ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा उसले खेलेको भूमिका र त्यसपछिको प्रयोग शान्तिसम्झौता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति उसको प्रतिबद्धताबाट म प्रभावित भएं । सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको घोषणा, संघीयताको सबै नारा एकीकृत नेकपा माओवादीकै पहलमा संस्थागत भएको हो । अग्रगमनको पक्षपाती अरू कोही छ भने एकीकृत नेकपा माओवादी मात्र छ भन्ने मलाई लाग्यो । कुर्सी त्यागेर पनि नागरिक सर्वोच्चताको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि अविचलित रूपमा लागेको देखेर म प्रभावित भएं । माओवादीले जुन उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो, त्यसले पनि मलाई प्रभावित गर्‍यो । माओवादीभित्र रहेका जुझारु कार्यकर्ताले मलाई आकर्षित पारे । एमालेको गलत नीति, विचार र माओवादीको सही विचारको संयोजनबाट नै म माओवादीमा प्रवेश गरें ।
० नेकपा एमालेभित्रका राष्ट्रवादी र नागरिक सर्वोच्चताका पक्षधरहरूलाईतपाईंके भन्न चाहनुहुन्छ ?
नेपालमा सम्पूर्णवामपन्थीहरू मिलेर वामपन्थी एकता हुन जरुरी छ । त्यसबाट मात्र हामी मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौं । मुलुकमा सदियौंदेखि थाती राखेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न एकीकृत नेकपा माओवादीको शक्तिलाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ । एमालेभित्र रहेका क्रान्तिकारी राष्ट्रभक्त युवाहरूलाई पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्दछु । पार्टीगत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा म संग सम्बन्धित सम्पूर्ण मेरा शुभेच्छुकहरूलाई पनि पुरानो विचार छोडेर आउन आहृवान गर्दछु । यहां तपाईंहरूलाई सम्मान गरिन्छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
० अन्त्यमा आमजनसमुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मुलुक अहिले सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भएको छ । यद्यपि यहां केही अवरोध भएका छन्, प्रगतिशील र परिवर्तनकारी शक्तिलाई केही समय भने पनि रोक्न सकिन्छ कि भनेर केही शक्ति लागेका छन् तर, त्यो क्षणिक हो । एकीकृत नेकपा माओवादीको झन्डामुनि गोलबद्ध भएर हामी अगाडि बढ्दा नेपाली जनताको भविष्य राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
Posted by CHINTAN on मे 31, 2009 in HOME
← मदन भण्डारीको हत्या आफ्नै कारणः नेपाल	धुमपान रोक्न जनचेतना →	3 responses to “एमालेमा पहिरो, माओवादीमा ओइरो”	b.b. gurung	मे 31, 2009 at 1:42 बेलुका	जेहोस्, सक्यो भने यो सरकारले एक वर्षघि बिदाई गरेको राजतन्त्रको पर्ुनर्जन्म गराउँदै एक वर्षघि जन्मिएको गणतन्त्रको मलामीमात्रै हैन पिण्ड दिन समेत भ्याउने निश्चित छ । त्यसैले यो पिण्डे सरकारले यसप्रकारको अरु कुनै नयाँ चमत्कार गरिहाल्यो भने पनि नेपाली जनताले आर्श्चर्य मान्नुपर्ने छैन । किनकि त्यसप्रकारको चमत्कारमा खुसी मनाउने अलिअलि जन्तुहरु पनि यही नेपालमै छन् ।
यी र यस्ता थुप्रै चमत्कारका बाबजुद के निष्कर्षा पुग्न सकिन्छ भने चुनावमा जित्नैपर्ने केही छैन । आखिर चुनाव हारेपनि डाडु पन्यूँ पाइदो रहेछ क्यारे अनि किन चुनावै जित्नुपर्‍यो ? साँच्चै मन्त्री नै हुने हो भने त हार्दै हिड्नुपर्ने पो भो त । कि कसो – चुनाव जित्ने जिल्लारामहरु ?
sajan	मे 31, 2009 at 1:43 बेलुका	नेपाली समाजमा रहेको सदियौंदेखिको संरचनागत र सामाजिक द्वन्द्वको सम्बोधन परिवर्तनकामी प्रगतिशील बाटोबाट मात्र सम्भव छ । त्यसको अगुवाईमा एकीकृत नेकपा -माओवादीले गरेको छ भन्ने कुरा उसका विचार र कदमहरूले पुष्टि गरेका छन्। आज देशमा जे-जस्ता राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित भएर संविधानसभामार्फत् सम्बोधन हुंदैछन् ती अधिकांश माग, आन्दोलन र जनविद्रोहको रूपमा उसैबाट अघि सारिएका हुन्। यसै कारणले पनि अबको नयां ढङ्गको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको आन्दोलनको अगुवाई गर्ने जिम्मा नेपाली जनताले उसैलाई दिएका छन् । तर, आज कथित सर्वसत्तावादको नाममा जनतालाई भ्रमित गर्दै नेपाली समाजलाई जसरी पनि यथास्थितिमै राखी राख्ने वा पछाडि धकेल्ने षड्यन्त्र विभिन्न शक्तिहरूबाट भइरहेको छ । यस्तो षड्यन्त्रलाई चिर्दै अगाडि बढ्न एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीलाई बलियो र सुदृढ बढाउन आवश्यक छ । उसैको नेतृत्व र अगुवाईमा एकीकृत वाम आन्दोलन अघि बढाउन जरुरी छ ।
chintankochautari	जुन 1, 2009 at 9:31 बिहान	मुलुकको वामशक्तिको रूपमा स्थापित नेकपा -एमाले सरकारबाट हटी राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्न उक्साउने कार्यमा संलग्न हुने तथा मुलुकका यथास्थितिवादी शक्तिहरूसंग सांठगांठ गर्दै सरकारकै नेतृत्व गर्ने कार्य गर्दैछ । यो कम्युनिस्ट आदर्श र पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रस्तावको विपरीत भएको पुष्टि हुन गएको छ । उसका कदमहरू दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मर्म र भावना तथा संविधानसभामा जनताका अभिमतद्वारा नागरिक सर्वोच्चता सुदृढ गर्ने भावना विपरीत छ । यसका गतिविधिहरू राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सम्मानप्रतिको प्रतिबद्धता विपरीत देखिन पुगेका छन्। यसको स्थितिमा नेकपा एमालेमै बसेर काम गर्नु कम्युनिस्ट आदर्श र मान्यताविपरीत हुने भएकाले सम्पुर्ण देशभक्त र राष्ट्रवादी एमाले समर्थकहरूलाइ एमालेको यस नितिको विरोध गर्न अाह्वान गर्दछु ।